न्यूज सञ्जाल: » चर्चित अविवाहित महिला कलाकारहरुको यसपालीको तीज !
चर्चित अविवाहित महिला कलाकारहरुको यसपालीको तीज !
न्यूज सञ्जाल १५ भाद्र २०७६, आईतवार १७:०३
उनी हरेक वर्ष तिज विशेष गीतहरु निकाल्ने गर्छिन् । यो वर्ष भने उनी नेपाली रियालिटी शो लोकस्टारमा जजको भूमिकामा छिन् । उनका ‘दर खाने दिन’ अब त मैलै नी झुम्का लगाउँछु, यस पाली नी खाने हो दर, नाचौँ सरर लगायतका तिज गीतहरु चर्चामा छन् । उज्याले अनलाइनबाट